Nkwadebe nyocha - Ụlọ akwụkwọ asụsụ BLI na Canada
N'ebe a na BLI, anyị enwetawo ndị nkuzi nkuzi nyocha maka njikere ịduzi gị site na nyocha nke ị họọrọ, na-enye gị akara ngosi bara uru na atụmatụ iji mekwuo akara gị, na ịkwadebe gị maka ọkwa gị kacha mma.
BLN Ọkwa 9
Abụọ oge zuru ezu
Nchoputa FCE gosipụtara na i nwere nkà asụsụ iji bie ndụ ma na-arụ ọrụ n'adabereghị na mba Bekee ma ọ bụ na-amụ ihe na nkuzi kụziri n'asụsụ Bekee.
Ihe ngosi FCE gosiri na i nwere ike:
na-ekwurịta okwu n'ụzọ dị irè, na-ekwupụta echiche na na-ekwupụta arụmụka
dee ederede zuru ezu, nke zuru ezu, Bekee, ikwupụta echiche na ịkọwa uru na ọghọm dị iche iche nke echiche dịgasị iche iche
dee akwụkwọ ozi, akụkọ, akụkọ na ọtụtụ ụdị ederede ndị ọzọ.
Atọ zuru ezu atọ
Ihe kariri ulo akwukwo ndi 8,000, ulo oru na ngalaba gọọmenti gburugburu ụwa na-anabata Cambridge English: Advanced (CAE) dị ka ihe akaebe nke ọkwa dị elu n'ịmụ asụsụ Bekee.
Ịkwadebe maka CAE na-enyere ụmụ akwụkwọ aka ịzụlite nkà iji mee ihe ka ukwuu n'ịmụ, na-arụ ọrụ ma na-ebi na mba Bekee.
Ntụle CAE na-egosi na i nwere ike:
soro usoro agụmakwụkwọ na mahadum
na-ekwurịta okwu n'ụzọ dị irè na ọkwa nchịkwa na ọkachamara
soro na-enwe obi ike na nzukọ ọrụ ma ọ bụ nkuzi ụlọ akwụkwọ na ọmụmụ ihe
kwupụta onwe gị na ọkwa dị elu.
Ntugharị nkuzi nke BLI IELTS ga-enyere gị aka inweta nsonaazụ kachasị mma gị mgbe ị na-anwale IELTS.
Ihe di elu nke British, Canadian, Australian, Maltese and South Africa University, na otutu akwukwo, ndi ulo akwukwo ihe omumu America.
Ọ bụrụ na ị bu n'obi ịkwaga Canada ma ọ bụ Australia, a chọrọ IELTS.
BLI IELTS nyocha na-enye gị ngwá ọrụ dị mkpa ịkwesịrị ịga nke ọma.
Ndị nkụzi mara mma BLI ga-akụziri gị usoro niile ị chọrọ iji nweta akara elu IELTS.
TOEFL® bụ nchọpụta kachasị ewu ewu maka asụsụ Bekee nke North America na ọ bụ nyocha asụsụ Bekee a nabatara n'ọtụtụ ụwa. Ntinye ntinye na BLI TOEFL ga-enye gị nkà ule dị mkpa na ọkwa asụsụ ị chọrọ iji mee nke ọma n'ule gị.